Global Voices teny Malagasy » Niteraka fahatezerana ny fiantsoana hanolana vehivavy mpanao gazety iray avy amin’ny propagandista iray ao Makedonia · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 22 Oktobra 2018 12:14 GMT 1	 · Mpanoratra Marko Angelov Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Makedonia, Fahalalahàna miteny, Hafanàm-po nomerika, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika, Vehivavy sy Miralenta, Zon'olombelona
“Mendrika ny tsara kokoa izahay” hetsi-panoherana 2015 teo anoloan'ny governemantan'ny Repoblikan'i Makedonia. Sary avy amin'i Vancho Dzambaski tao amin'ny Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)
Naaton'ny masoivohom-baovaom-panjakana Makedoniana (MIA) ny mpiasan'ny fampahalalam-baovao sy ilay propagandista malaza Cvetin Chilimanov  tamin'ny 3 Oktobra taorian'ny niantsoany hanolanana mpanao gazety vahiny iray Valerie Hopkins tao amin'ny Twitter.
Mpanohana mavitrika ny antokon'ny fitondrana Makedoniana teo aloha, VMRO-DPMNE, izay nitantana an'i Makedonia nanomboka tamin'ny taona 1998 ka hatramin'ny taona 2002 ary nanomboka tamin'ny taona 2006 ka hatramin'ny taona 2017 i Chilimanov. Mpanolotsaina ara-politika ny filoha teo aloha mpomba an'i Kremlin, Gjorge Ivanov nandritra ny fe-potoam-piasana voalohany nanomboka tamin'ny taona 2008 izy. Tamin'ny taona 2017, nandray anjara tamin'ny fanentanana ho an'ny “de-Sorosization” , izay nikendry ny fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana vatsian'ilay miliardera Hongroà-Amerikana George Soros izy.
Nanomboka ny zava-nitranga rehefa nitsidika an'i Makedonia i Hopkins, mpampita vaovao ao amin'ny Financial Times Balkans, mba hitatitra  momba ny fitsapa-kevi-bahoaka izay nifidianan'i Makedoniana raha tokony hiditra ao amin'ny OTAN sy ny EU ny firenena na tsia.
Tao amin'ny Twitter, nofintinin'i Hopkins ny resaka nifanaovany tamina mpamily fiarakaretsaka iray izay nanohitra ny fidirana amin'ireo sampana governemanta iraisam-pirenena ary naneho fahadisoam-panantenana isan-karazany momba ny fifandraisan'i Makedonia amin'ireo firenena hafa ao amin'ny faritra:
Skopje taxi boycotter: Mihevitra i Bolgaria fa tsy misy ny fiteninay, mandà hankatoa ny fiangonanay i Serbia, sakanan'ny Grika ny anaranay ary manana olana amin'ny Albaney izahay. Tsy manana olana izahay, manana olana ny hafa rehetra. Fa maninona izahay no tokony hiaraka amin'ny fiarahan-dia ara-miaramila? Tiako ny EU saingy zero ny vintanay.
Makedoniana maro no nisioka indray ny siokan'i Hopkins, satria nanasongadina ny tsy fifanarahan-kevitra tamin'ny fanentanana “Boycott”, tetikasa ankolaka an'ny antokon'ny fitondrana teo aloha, VMRO-DPMNE, izay mbola manana toerana ao amin'ny governemanta ankehitriny izany.
Namaly ny siokan'i Hopkins tamin'ny fandrahonana manaraka toy izao i Chilimanov:
Ho an'ireo mpamily fiarakaretsaka rehetra izay manaraka ahy: Raha miditra ao anaty fiaranao ity, dia izay no fotoanan'i Chichko Kumplung!
Nanondro ny sarimihetsika 1996 Suicide Guide (Toro-lalana Famonoan-tena)  (nantsoina tany am-boalohany hoe “Fandravan-tena”), izay niantso tovovavy iray ho any amin'ny toerana lavitra sy nanolana azy ny mpamily fiarakaretsaka iray antsoina hoe Chichko Kumpling (Dadatoa Clutch). Fatiantoka goavana ilay ilay horonantsary, ary tsaroana indrindra amin'ny sehatra an-tsary misy firaisana ara-nofo noterena [NSFW].
Iray amin'ireo voalohany naneho hevitra tamin'ny lahatsoratra Facebook  mikasika ny fanararaotana i Jovica Mihajlovski, mpilalao sarimihetsika izay nilalao an'i Chichko Kumplug tao amin'ny sarimihetsika
Tiako hampahatsiahivina ity olona Cvetin ity, izay nilalao an'i Chichko Kumplung, fa tao anatin'ilay sarimihetsika, dia niafara teny amin'ny seza misy kodiarana izy izay sazy noho ny heloka bevava dradradradrain'i Chilimanov amin'izao fotoana izao. Mandrisika azy sy ireo mpanaraka azy rehetra aho mba hizara ny nahazo an'i Kumplung ary hiafara amin'ny fomba mitovy. Fampahatsiahivana iray hafa, ilay mpamily fiarakaretsaka Kumplung no tena mpilalao fototra tamin'ny horonantsary SELF-DESTRUCTION. Angamba izy dia nentanin'ny lohateny, hanatanteraka ny iraka masiny. Mirary fahombiazana avy amin'ny Dadatoa!
Haingana ihany koa ireo feo ofisialy namaly ny siokan'i Chilimanov. Niantso izany ho “mahamenatra sy tsy azo ekena ” ny solontena ambonin'ny OSCE ho an'ny Fahalalahan'ny Media Harlem Desire “:
Mahamenatra sy tsy azo ekena ny sioka mandrahona ilay mpanao gazety Valerie Hopkins @VALERIEin140  avy amin'ny @Cvetin . Tsy tompon'andraikitra ny fandrahonana rehetra atao amin'ny mpanao gazety, indrindra fa ny fandririsihana herisetra atao amin'ny vehivavy mpanao gazety. Tokony hanaisotra ny siokany avy hatrany i @Cvetin .
Niala tsiny ampahibemaso tamin'ny anaran'i Makedonia sy ny olony ny minisitry ny raharaham-bahiny Makedoniana Nikola Dimitrov . Niampanga ny antso fanolanana ho toy ny endrika herisetra sy fanitsakitsahana ny fenitra arak'asa ny Fikambanan'ny mpanao gazety ao Makedonia  sy ny Vaomieran'ny Etikan'ny Fampahalalam-baovao ao Makedonia .
Mamaly ireo sioka avy amin'ireo solontenan'ny vondrom-piarahamonina iraisam-pirenena, nilaza i Chilimanov fa nisangisangy fotsiny izy. Tsy nety nanala ny sioka izy tamin'ny voalohany, saingy tsy hita intsony izany afaka andro maromaro taty aoriana.
Raha nanambara ny MIA fa hampiato an'i Chilimanov, maro ireo Makedoniana nankasitraka izany fanapahan-kevitra izany, mahita izany ho famantarana ny vanim-potoana vaovao, izay tompon'andraikitra amin'ny fihetsiny ny mpiasan'ny fanjakana.
xxxxThe self-proclaimed journalist who called for sexually assaulting @VALERIEin140  has been suspended from the Macedonian Informational Agency, where he works. https://t.co/RB6WplYFHK 
Naaton'ny Sampam-baovao Makedoniana, izay iasany ilay milaza tena fa mpanao gazety izay niantso ho an'ny fametavetana an'i @VALERIEin140 
Ny hafa kosa nampahatsiahy fa tamin'ny nitondran'ny VMRO-DPMNE, miantso herisetra ho an'ireo tsikera saingy tsy nahitana vokany ireo mpanohana azy sy ireo olona atokisany – anisan'izany i Chilimanov – :
Tadidio ny lisitra maintin'ireo mpisera Twitter izay tokony havoaka ny mombamomba azy ireo mba ahafahana manorisory azy ireo? Ny Fasista Cvetin no nitarika io hetsika io. Ankehitriny, ovy kely ireo mpisera Twitter, noho izany dia tonga tamin'ny fiantsoana hanolanana mpiara-miasa mpanao gazety. Saingy tamin'ity indray mitoraka ity, dia niditra tamin'ny fasika mitelim-pandalo izy. Hahafinaritra ny mijery izany.
Raha ny marina, tsy vao voalohany i Chilimanov no nampiasa media sosialy mba ‘hamazivaziana’ fanaovana herisetra ara-politika amina mpanao gazety. Tamin'ny lohataona 2018, namoaka lahatsoratra iray tao amin'ny Facebook izy izay mampiseho fa ekena ny mandòna ilay mpanao gazety sady mpikatroka Petrit Saracini  amin'ny fiara. Tamin'ny fanehoan-keviny, nanoratra i Chilimanov  hoe: “Nanitsaka ny hisatra aho rehefa niampita arabe i Petrit. Ry adalako”
Asa propagandista mpandrendri-bahoaka elatra ankavanana
Iray amin'ireo propagandista ambony ao amin'ny VMRO-DPMNE hatramin'ny taona 2008 i Chilimanov . Taorian'ny niasany tao amin'ny kabinetran'ny filoha, voatendry ho mpampita vaovaon'ny Sampam-baovao Makedoniana (MIA) tany Washington, DC nandritra ny taona maro izy.
Taorian'ny niverenany tany Makedonia, lasa mpamoaka lahatsoratry ny MIA izy, ary izy no filoha lefitry ny Fikambanan'ny mpanao gazety Makedoniana , fikambanana tsy miankina iray nalamin'ny governemanta  ary tohanan'ny governemanta VMRO-DPMNE mba hanamafisana ny tombotsoany ara-politika amin'ny fakàna tahaka tanteraka ilay Fikambanan'ny Mpanao gazety ao Makedonia tena izy.
Tamin'ny taona 2016, niditra tamin'ny fampielezan-kevitra fanaratsiana ny vondrona fiarahamonim-pirenena izay nitsikera ny antoko izy, indrindra tamin'ny alalan'ny vondrona Stop Operation Soros,  izay niezaka hamorona disadisa eo amin'ny governemantan'i Donald Trump, ny Departemantam-panjakana Amerikana sy ny USAID amin'ny alàlan'ny fandresen-dahatra an-dalantsara tsy voasoratra anarana any Etazonia.
Rehefa tafala tamin'ny toerany tamin'ny alalan'ny fifidianana ny VMRO-DPMNE tamin'ny taona 2017, mbola nitazona ny toerany tao amin'ny MIA i Chilimanov. Tsy toy ny tamin'ny fahatongavan'ny VMRO-DPMNE teo amin'ny fitondrana, fa tsy nisy ny fanadiovana mifototra amin'ny fironana ara-politika eo amin'ny mpiasa ao amin'ny fitantanam-panjakana sy ny orinasan'ny fanjakana.
Tsy nanambara ny MIA raha hitarika ny fandroahana an'i Chilimanov ny fampiatoana. Hotarihin'ny komity anatiny sy ny talen'ny sampana ny raharaha momba azy.
Fanamarihan'ny mpamoaka lahatsoratra: Ny Global Voices dia mahazo fanohanana avy amin'ny Fikambanana Open Society, izay ao anatin'ny tambajotra Soros.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/10/22/128160/
 Cvetin Chilimanov: http://meta.mk/en/tag/cvetin-chilimanov/
 fitsapa-kevi-bahoaka : https://globalvoices.org/2018/09/29/do-macedonians-want-their-country-to-join-nato-and-the-eu-a-historic-referendum-will-decide/
 1996 Suicide Guide (Toro-lalana Famonoan-tena): https://www.imdb.com/title/tt0365714/
 sehatra an-tsary misy firaisana ara-nofo noterena : https://www.youtube.com/watch?v=3yRRfse4W6I
 tamin'ny lahatsoratra Facebook: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217059277295100&set=a.10212271086393320&type=3
 mahamenatra sy tsy azo ekena: http://www.balkaninsight.com/en/article/osce-condemns-threats-against-ft-balkan-correspondent-10-02-2018
 minisitry ny raharaham-bahiny Makedoniana Nikola Dimitrov: https://www.rferl.org/a/macedonia-foreign-minister-apologizes-to-correspondent-threatened-by-local-journalist/29523382.html
 Fikambanan'ny mpanao gazety ao Makedonia: https://a1on.mk/archives/956910
 Vaomieran'ny Etikan'ny Fampahalalam-baovao ao Makedonia: http://semm.mk/soopshtenija-4/571-soopshtenie-na-znm-ssnm-i-semm
 Petrit Saracini: https://civilmedia.mk/chilimanov-povika-na-siluvane-na-stranska-novinarka-man-go-brani/
 nanoratra i Chilimanov: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155614731157155&set=a.10151431432397155&type=3&permPage=1
 Fikambanan'ny mpanao gazety Makedoniana: https://ssnm.org.mk/macedonias-media-potemkin-villages/?lang=en
 fikambanana tsy miankina iray nalamin'ny governemanta: https://en.wikipedia.org/wiki/Government-organized_non-governmental_organization
 vondrona Stop Operation Soros,: http://meta.mk/en/sos-an-unregistered-ngo-gongo-or-pongo/